बुवाले दिएको मिर्गौलाले उनको शरीरमा १५ मिनेटभन्दा बढी काम नगरेपछि – Sandesh Press
काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका- ३ का बुद्धसिंह लामा दुई वर्षअगाडि अ’चानक बिरामी परे। घुँडामुनि खुट्टा सु’न्निन थाल्यो।
उनीहरू आयुर्वेदिक औषधालय गए। बिना परीक्षण औषधी से’वन गर्न थाले। आयुर्वेदिक औषधीले काम दिएन। बुद्धसिंह झन् बिरामी पर्न थाले। नियमित काममा जान नसक्ने भइसकेका थिए। यस्तो अवस्थामा घरै बसिरहनु उचित नहुने ठानेर उनी हिँडे।
यो शं’का नि’वारणका लागि भिनाजुले बुद्धसिंहलाई भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा पठाए। त्यहाँ परीक्षण गर्दा डर लाग्ने रिपोर्ट आयो। बुद्धसिंहका दुबै मिर्गौला फेल भइसकेका रहेछन्। रिपोर्ट हेरेपछि बुद्धसिंहको शरीरमा रहेको बाँकी जोश-जाँगर र शक्ति पनि हराउन थाल्यो।
उनी आफैं छोरालाई एउटा मिर्गौला दिन तयार भए। आफ्नो मिर्गौला दिएर छोरालाई बचाउन सकुँला भन्ने उनको सपना थियो। गत चैत-वैशाखमै प्रत्यारोपण गर्ने योजना थियो। तर, कोरोना म’हामारीका बीच प्रत्यारोपण सेन्टरमा अप्रेसन प्रभावित भयो। उनीहरू कुरिरहेका थिए। जब प्रत्यारोपण सेन्टर खुलेको जानकारी पाए, उनीहरूले प्रक्रिया सुरू गरे। डाक्टरको सुझावअनुसार नै डेढ महिनाअघि बुद्धसिंहलाई प्रत्यारोपण केन्द्र ल्याइएको थियो। केन्द्रको प्रि-ट्रान्सप्लान्ट वार्डमा राखियो।
‘म आज रातभरि पनि बाँच्दिनँ होला,’ बुद्धसिंह भनिरहेका थिए, ‘मेरो जीउभित्र पानी उम्लिएजस्तो भएको छ।’डाक्टरले सिटी स्क्यान गरे। रिपोर्ट हेरेपछि भने- ल, बुवाले दिएको मिर्गौलाले काम दिएन। अप्रेसन गरेर फा’ल्नु पर्ने भयो, नत्र बिरामीको ज्या’न जान सक्छ। जितलालका अनुसार यसपछि बुद्धसिंहलाई पुन: अप्रेसन कक्षमा छिराउने तयारी भयो। डाक्टर-नर्सहरू ग्वार्ग्वार्ती आए।
‘खै अब कोसँग मिर्गौला माग्ने? मिर्गौलाको दाता भेटिए पनि यसको शरीरले थेग्छ थेग्दैन,’ जितलालले चि’न्ता व्यक्त गरे।
अप्रेसनपछि रक्तचाप घ’टेर रगतले मिर्गौला जाम भएको अस्पतालको भनाइ छ। रक्तचाप बढाउन खोजे पनि नसकिएको र अन्तत: मिर्गौला निकालेर फाल्नु परेको डाक्टरहरू बताउँछन्।
यो घ’टनाबीच आफन्तलाई नयाँ मिर्गौला खोज्न भनिरहेको र आफूहरू पनि ‘ब्रेन डेड’ व्यक्तिको मिर्गौला पाए प्रत्यारोपण गरिदिने भनेको ज्ञवाली बताउँछन्।
आफन्तले भने यो अप्रेसनमा डाक्टरले लापरबाही गरेको आ’रोप लगाएका छन्। डाक्टरले प्रत्यारोपणपछि राम्रोसँग रेखदेख नगरेका कारण मिर्गौला खेर गएको बताएका छन्।
ला’परबाहीका कारण भने यो घ’टना नभएको ज्ञवाली बताउँछन्। ‘रक्तचापको समस्या साधारण होइन, मैले आफन्तहरूलाई ला’परबाही हैन भनेर काउन्सिलिङ गरेको पनि छु,’ ज्ञवाली भन्छन्।
‘ब्रेन डेड’ भनेको दु’र्घटनामा परेर कसैको मस्तिष्क मृत भइसकेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिबाट आ’कस्मिक रूपमा जीवित अंग-प्रत्यङ्ग निकालेर प्रत्यारोपण गर्ने प्रक्रिया हो। सेन्टरमा हालसम्म ‘ब्रेन डेड’बाट ६ जनाको शरीरमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकिएको छ।
मेरो एउटा नाति त हो, यो जग्गा राखेर उपचार हुन्छ भने किन नगर्ने? भन्दै डम्बरले कृष्णबहादुरलाई जग्गा पास गरे। त्यो जग्गा राखेर साढे पाँच लाख रुपैयाँ लिएर हिँडेका कृष्णबहादुर यो सब घ’टनाक्रमले विक्षिप्त छन्।
Prevसोच्नै नसकिने गरी ह्वात्तै घट्यो प्याजको मूल्य
Nextयी राशिमाथि हुन्छ सधैँ भगवान शिवको कृया, तपाई पनि पर्नुभयो की ?